Jose Mourinho: Paul Pogba Ilbidhiqsi Laguma Bedeli Karo – Wuxuu Leeyahay Wax Kastoon U Baahnayn’
HomeWararka MaantaJose Mourinho: Paul Pogba Ilbidhiqsi Laguma Bedeli Karo – Wuxuu Leeyahay Wax Kastoon U Baahnayn’
Laacibka lacagtii ugu badnayd ee ciyaaryahan la siisto lagu iibsaday ee Paul Pogba wuxuu u baahnaan doonaa wakhti fiican oo uu kula qabsado kubbada cagta Ingiriiska iyo kooxda Man United labada, sidaas waxaa sheegay tabobarihiisa Jose Mourinho.
23 jirka reer France ee khadka dhexe ka ciyaara, oo aduun dhan £89m badhtimihii bisha August ay soo siisatay Manchester United, ayaa dhaliyey laba gool oo daran doori ah kulankii xalay 4-1 ka ay kaga badiyeen Fenerbahce ee ku tirsanaa horyaalka Europa League, isagoo iska maydhay ceebtii ka raacday qaab ciyaareed xumadiisa, ciyaartii barbar dhaca 0-0 ka ah ay la galeen Liverpool Isniintii.
“Laba maalmood ka hor wuxuu ahaa ciyaaryahanka ugu liita horyaalka Premier League 48 saacadood kadibna wuxuu isu rogay mar la arag ama mucjiso,” ayuu yidhi tabobare Mourinho.
“Wakhti ayuu u baahan yahay in la siiyo. Anigu qaab ciyaareedkiisa waan ku qanacsanahay. Wuxuu leeyahay wax kasta oo aan uga baahnayn.”
Mourinho, oo laba xili ciyaareed ku qaatay maamulida kooxda Inter Milan, una qaaday Champions League sanadii 2010, wuxuu rumaysan yahay in Pogba uu ku jiro marxalad kala guur ah oo uu isaga diga roganayo laba hanaan kubbadeed, maadaama oo uu Talyaaniga iyo Juventus ka yimid Ingiriiskana joogo.
“Anigu waan soo arkay Kubbada Talyaaniga, waanan aqaanaa nidaamka iyo qaabkeedaba, kaas oo ku dhisan – Saldhig iyo cufnaan,” ayuu macalinka 53 jirka ah ee reer Portaqiis hadalkiisa sii raaciyey.
“Inaad Talyaaniga ka ciyaarta afar ama shan sanadood, kadibna dib ugu soo noqoto Premier League, Uma malaynayo in hal mar isbedel lagu samayn karo.”
Pogba, oo ciyaarta kadib sheegay inuu dareemayo ” Raaxo uu kooxda oo dhan kula ciyaarayo lana wadaagayo”, wuxuu hadda leeyahay 3 gool 10 ciyaarood oo uu u saftay United.
Philippe Coutinho Oo Markii U Horreysay Qirtay Inuu Ku Khasbay Liverpool In Laga Iibiyo Barcelona, Sababtii Ku Kelliftay Iyo Filashada Mustaqbalkiisa Camp Nou
07/02/2018 Abdiwahab Ahmed
‘Illaa Kulanka U Dambeeya Waanu Dagaallami Doonaa’ – Ancelotti